ကျေးဇူးတရားများ ဆီသို့ အမှတ်တရ .. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ကျေးဇူးတရားများ ဆီသို့ အမှတ်တရ ..
ကျေးဇူးတရားများ ဆီသို့ အမှတ်တရ ..
Posted by True Answer on May 8, 2011 in Buddhism, Science & Religion |7comments
၂၀၁၁- ဧပြီ ၉ ရက် ကွယ်လွန်သွားသော ဆရာကြီးပါရဂူ အတွက်……မနက်ဖြန် ဆိုလျှင် ဆရာကြီးကွယ်လွန်သွားသည်မှာ…..တစ်လတင်းတင်းပြည့်ခဲ့လေပြီ။
ပန်းချီဆရာကြီး ဦးစံတိုး၏ နာရေးရက်လည်နေ့တွင် ဆရာကြီးအား လူချင်း တွေ့ဖူးခဲ့သည်မှလွဲ၍ ဆရာကြီး နှင့် ရင်းနှီးခဲ့ခြင်း မရှိသော်လည်း ဆရာကြီး ၏ ကျေးဇူးတရားတို့ ကျွန်တော့်ထံ တွင်ရှိနေသည်ဟု ခံစားရပါသည်။
….တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀….. ကျွန်တော်မှာ တရားစာပေများကို စတင်လေ့လာနေစဉ်……ဆရာကြီး၏ စာပေများကို တရှိုက်မက်မက်ဖတ်မိရာမှ….၀ိပဿနာ ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ကာဟောကြားသောတရားများကို ဆရာကြီးမှ…..”ဓမ္မ (သို့) ဘ၀တစ်လျှောက်နေသွားနည်း” ဟူသော နာမည်ဖြင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရာမှ ..ထို စာအုပ် ကို ဖတ်မိပြီး ….အလွန်နှစ်သက်သဘောကျသွားရာမှတဆင့် ထိုစာအုပ်မှ ဆောင်းပါး နှစ်ပုဒ်နှင့် အတူ ကျွန်ုပ် မတောက်တခေါက်….ရေးထားသော တရားစာအချို့ကို ကိုယ်တိုင် စာစီလျှက် စာအုပ်လေးပြုလုပ်….မိတ္တူကူးကာ… မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများအား စတင်ဝေငှကာ …..တရားဓမ္မများကို စတင်ခဲ့ပါသည်။
ဆရာကြီး ကွယ်လွန်ပြီးပြီးချင်း အမှတ်တရ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးရန် တာဆူခဲ့သော်လည်း….ကျွန်တော့်ဘ၀တွင် ဘယ်လိုမှ ….မထင်မှတ်ထားခဲ့သော ……..shock ….ဟု ဆိုရလောက်သည့် ..လောကဓံ စားမေးပွဲတစ်ခု … ရုတ်တရက် ဖြစ်ပေါ်လာသဖြင့်….ကျွန်တော်မှာ… ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တရားနှလုံး မှု ကို သာ အထူးဦးစားပေးလျှက် တစိုက်မတ်မတ်လုပ်လျှက်…(အမှန်တရား ကို မမေ့မှု..သတိရမှုဖြင့်) လောကဓံ စာမေးပွဲ ကို ဖြေနေသဖြင့် စာများ မရေးဖြစ်ခဲ့ပါချေ။
ထို့အတွက်ကြောင့်လည်း ဆောင်းပါးအသစ်တစ်ပုဒ်မရေးတော့ပဲ…..ဆရာကြီးရေးခဲ့သော ဆောင်းပါးမှ ကျွန်တော်စတင် ကူးယူ ဓမ္မဒါနပြုခဲ့သည် တရားဆောင်းပါးအား….ယခု ကျွန်ုပ်နားလည်နေသော မတောက်တခေါက် တရားအသိဥာဏ်လေးဖြင့် စာဖတ်သောသူများ ပိုမို နားလည်သဘောပေါက်စေရန် အလို့ငှာ အနည်းငယ် edition လုပ်လျှက် ဓမ္မဒါန ပြုအပ်ပါသည်….ထိုဆောင်းပါးကို ကျွန်တော် အွန်လိုင်းတွင် စတင်ဖြန့်ချီခဲ့သော (ဘ၀တစ်လျှောက်စိတ်ချမ်းသာစွာနေသွားနည်း) တရားစာအုပ်)တွင် ပထမဆုံးဆောင်းပါးအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ကျေးဇူးတရားများ ဆီသို့ အမှတ်တရ ..ဆောင်းပါး
၁)ယုံကြည်လက်ခံ လာသည့် အစွဲများ၊ ပညတ်ချက်များ(သတ်မှတ်ချက်များ)၊
ကျွန်ုပ်တို့သည် မွေးဖွားလာရသည့် အိမ်ထောင်စု၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ မျိုးရိုး အစဉ်အလာ ပတ်ဝန်းကျင်နေရာဒေသ ဓလေ့ထုံးစံ အရ ယုံကြည်လက်ခံ လာသည့် အစွဲများ၊ ပညတ်ချက်များ(သတ်မှတ်ချက်များ)၊ ယုံကြည်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မပြတ် ကြားနေရပါသည်။
ထိုသတ်မှတ်ချက်များ၊ အစွဲများ၊ ယုံကြည်ချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့နားတွင် စွဲမြဲကာ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးတွင် အမြစ်တွယ်နေပါတော့သည်။ ဘယ်လောက်တောင် အမြစ်တွယ်နေသလဲဆိုရင် ယင်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ အစွဲများ၊ ယုံကြည်ချက်များသည် အကျိုးအကြောင်း ညီသည်ဖြစ်စေ – မညီသည်ဖြစ်စေ စွဲလန်းနေမိပြီး။
ထို မိမိ ယုံကြည်ချက် မှလွဲ၍ အခြားသော ယုံကြည်မှုတစ်ခုခုသည်လည်း မှန်ကန်မှု ရှိနိုင်သေးသည် (သို့) နေရာဒေသ-အချိန်မရွေး၊ လူမျိုးဘာသာမရွေး ဘာသာတိုင်း-လူမျိုးတိုင်း အတွက် မှန်ကန်နေသော သစ္စာတရား၊ အမှန်တရားလည်း ရှိနိုင်သေးသည် ဟူသော အချက်ကို တွေးပင် မတွေးရဲကြပေ။
မိမိတို့ သတ်မှတ်ချက်များ၊ အစဉ်အလာများ၊ ယုံကြည်ချက် အစွဲများကို တရင်းတနှီး ဖက်တွယ်မိနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ မိမိတို့ အစဉ်အလာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည့် တခြားမည်သည့် အမြင်၊ အယူအဆကိုမှ လက်မခံနိုင်ကြတော့ပါဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ယုံကြည်ချက်အစွဲများ နှလုံးသား ထဲတွင် အမြစ်တွယ်နေပြီး ထိုယုံကြည်ချက်အစွဲများရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ မျက်မှန်စိမ်းတပ်မိသူလို ဖြစ်ရပါတော့တယ်။ ထို မျက်မှန် စိမ်းရောင်မှတစ်ပါး အခြား မည်သည့်အရောင်ကိုမျှ မမြင်ရတော့ပေ။ ထိုအခါ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ တရားစစ် တရားမှန်၊ သစ္စာတရား အမှန်တရားနှင့် ဝေးရာသို့ ရောက်သွားရ လေသည်။
ယုံကြည်ချက်အစွဲ မျက်မှန်စိမ်းအရောင်၏ တားဆီးမှု ကြောင့် သစ္စာတရားကို နားလည်အောင် မကြိုးစားချင်ကြတော့ပေ။ ကောက်ကျစ်သော အသိဥာဏ် တချို့၏ ဆင်ခြေပေးမှုများကြောင့် လက်ခံထားသည့် အယူဝါဒ၊ သတ်မှတ်ချက် အစွဲများကို စွဲလမ်းလွန်း အားကြီး နေကြပါသည်။
အယူဝါဒ သတ်မှတ်ချက် ယုံကြည်ချက်များကို လက်ခံရုံသက်သက်ကိုသာ ဦးစားပေးပြီး အယူဝါဒ၏ အရေးကြီးဆုံးအပိုင်း (မှန်မှန်ကန်ကန် နှလုံးသွင်းတတ်မှု)ကို ကျွန်ုပ်တို့ဟာ မေ့ထားမိကြပါသည်။ တခြားကိစ္စများသာ အရေးကြီးနေမိကြပါသည်။
၂) မိမိ စိတ်အေးချမ်းမှု စိတ်သဘောထား ဖြူစင်မှု တို့နှင့် မပတ်သက်သရွေ့
အယူဝါဒတစ်ခုသည် …..ဘာအကျိုးများ ရရှိနေပါ သလဲ။ ထိုအယူဝါဒ၊ ယုံကြည်ချက် အစွဲများသည် အကယ်၍ အမြဲ မှန်ကန်နေသည် ဆိုပါက ဘ၀တွင် အသုံးချ၍ ရရပါမည်-
မိမိ စိတ်အေးချမ်းမှု စိတ်သဘောထား ဖြူစင်မှု လောဘ၊ဒေါသ၊ကိလေသာများ ငြိမ်းအေးမှုနှင့် တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင် နေရပါမည်။ ဘ၀အေးချမ်းမှု၊ စိတ်အေးချမ်းမှု အတွက် အသုံးချ၍ရသော တရားသာလျှင် ဓမ္မစစ် ဓမ္မမှန် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်ပါက (စိတ်ထား ဖြူစင်မှု ၊ လောဘ၊ ဒေါသချုပ်ငြိမ်းမှုတို့နှင့် မည်သို့မျှ မပတ်သက်ပါက) ထို သတ်မှတ်ချက်၊ ယုံကြည်ချက် အစွဲများသည် အနှစ်မပါသော စိတ်ကူးယဉ်မှုများ သာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ထားစင်ကြယ်မှု (သို့မဟုတ်) လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟများ ကင်းဝေးမှု နှင့် မည်သို့မျှ မပတ်သက်သော ဒီသတ်မှတ်ချက်များ၊ ယုံကြည်မှုအစွဲများကို ဆုပ်ကိုင်လျှက် ကျွန်ုပ်တို့ဘ၀ကို ဆက်လက် ရှေ့ဆက်ကြမလား၊ ဒါမှမဟုတ် စင်ကြယ်သော စိတ်ထားများ ဖြစ်ပေါ်ရေး၊ သောကကင်းဝေးသောဘ၀ ဖြစ်ပေါ်ရေး- အဓိကထား၍ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်သွားကြမည်လား ဟူသော အချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
အဆောင်အယောင်၊ အပြင်အဆင်၊ ရိုးရာအ၀တ်အစားပုံစံ တစ်ခုခုကို ၀တ်ဆင်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ မ၀တ်ဆင်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ ဘာသာရေး ထုံးထမ်း စဉ်လာ ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုခုကို လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မလုပ်သည် ဖြစ်စေ မတရားသော စိတ်ထားများ၊ စိတ်နှလုံး ပူလောင်မှုများနှင့် ပြုလုပ်နေသမျှ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ သစ္စာတရား-အမှန်တရားနှင့် ကင်းဝေးမြဲ ကင်းဝေးနေပါမည်။
တစ်စုံတစ်ခုသော အဆောင်အယောင်၊ အ၀တ်အစား၊ အဆင်အပြင် တို့သည် အစဉ်အလာ ရိုးရာ ဓလေ့ထုံးစံများအရ လုပ်ဆောင်နေရသော လက်ခံရသောအရာများ ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ယင်းအဆောင်အယောင်၊ အ၀တ်အစား၊ အဆင်အပြင်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စိတ်အေးချမ်းမှု၊ စိတ်ဖြူစင်မှု၊ မျှတသောစိတ်ထားများဖြစ်ပေါ်မှုတို့နှင့် မည်သို့မျှ မပတ်သက်ပါက အပေါ်ယံမျှ သာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ အနှစ်မပါ အကာသက်သက်သာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ဒီအဆောင်အယောင်၊ အ၀တ်အစား၊ ဓလေ့ထုံးစံ၊ ၀တ်ပြုမှု၊ ဆုတောင်းမှုများကို လုပ်နေရုံသက်သက်မျှဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ မိမိကိုယ်မိမိ လုံလောက်နေပြီ၊ ပြည့်စုံ နေပြီ၊ တရားရှင်ဖြစ်ပြီဟု ထင်မြင်နေပါက အန္တရာယ် ကြီးမားလှပါသည်။
၃) (ဘာဝနာမယဥာဏ်ဖြင့် – နှလုံးသွင်းမှန်မှုဖြင့် ) သိမြင်ခြင်း မရှိသေးပါက
ဓမ္မ၏အနှစ်သာရ (သို့) သစ္စာတရားကို (ဘာဝနာမယဥာဏ်ဖြင့် – နှလုံးသွင်းမှန်မှုကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်) ထိုးထွင်း သိမြင်ခြင်း မရှိသေးပါက ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ပြည့်စုံသူ ၊ အေးချမ်းသူ ၊ သောက ကင်းဝေးသူ၊ ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်သူ ဟူ၍ မဆိုနိုင်ပါ။ အကယ်၍ ပြည့်စုံသူ ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်သူဆိုပါကလည်း ယာယီသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည် ။
ဓမ္မ၏အနှစ်သာရ (သို့) သစ္စာတရားများကို (ဘာဝနာမယဥာဏ်ဖြင့် – နှလုံးသွင်းမှန်မှုဖြင့် ) သိမြင်ခြင်း မရှိသေးပါက ကျွန်ုပ်တို့ဟာ မငြိမ်းချမ်းသောသူ….မပြည့်စုံသောသူများသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည် ။
ထိုအခါ ဘာသာရေး-အပြင်အဆင်-အ၀တ်အစား-၀တ်ပြုမှု-ဆုတောင်းမှုများလောက်နှင့် သောင်တင်နေပြီး အကာအခွံအလုပ်များနှင့်သာ အချိန်ကုန်နေပေလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်နေသော ဘာသာရေး အဆောင်
အယောင်၊ အ၀တ်အစား၊ တို့သည် စိတ်နှလုံး စင်ကြယ်ခြင်း (သို့) လောဘ၊ ဒေါသတို့ ချုပ်ငြိမ်းခြင်း (သို့) အကောင်းအဆိုးတို့အပေါ် မငြိတွယ်သော စိတ်ကလေးများ ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် ဦးတည်နေရမည်ဟု နားလည်ထား ရပေမည်။
၄) တွေ့ကြုံလာသမျှ အကောင်းအဆိုး တို့အပေါ်…….တွေ့ကြုံရုံသက်သက်ဖြစ်စေဖို့
တွေ့ကြုံလာသမျှ အကောင်းအဆိုးတို့အပေါ် တွေ့ကြုံရုံသက်သက်ဖြစ်စေဖို့ (တနည်းအားဖြင့်) အတည်မယူပဲ….အဟုတ်မထင်ပဲ…ငြိတွယ်မှုကင်းနေသောစိတ်ကလေးများ ဆက်ကာ…ဆက်ကာ…ဖြစ် ဖြစ် လာစေဖို့ လိုအပ်ပါသည်…။
မိမိစိတ်သန္တာန်တွင် ထိုကဲ့သို့…မဖြစ်ပေါ်သေးပါက ………ထိုစိတ်ကလေးမျိုး ၊ ထိုစိတ်ထားမျိုး ငါတို့တွင် မဖြစ်ပေါ်သေး -လိုအပ်နေသေးသည်………ဟု သိနားလည်လိုက်ဖို့လိုပါသည်။
ထိုသို့ သိနားလည်လိုက်ခြင်းမရှိပါက ၀တ်ပြုမှု၊ ဆုတောင်းမှု၊ အဆောင်အယောင် အ၀တ်အစား သတ်မှတ်ချက် အစွဲများ၌သာ လမ်းဆုံးနေပြီး သစ္စာတရားသိရှိရေး စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ပေ။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ အဆောင်အယောင် သတ်မှတ်ချက် ဘာသာရေး အလုပ်များထက် ကျော်လွန်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်အေးချမ်းမှု၊ အတွက် အလိုအပ် ဆုံးဖြစ်သော သစ္စာတရားများကို ခန္ဓာဥာဏ်ရောက် (ဘာဝနာမယဥာဏ်ဖြင့် – နှလုံးသွင်းမှန်မှုဖြင့် …..မှန်ကန်သောနားလည်မှုဖြင့်) သိရှိရေး……ဘာတွေ လိုအပ်နေသနည်း….. ဟု မိမိတို့ဘ၀ကို ပြန်လည်စိစစ်ဖို့ အရေးတကြီး လိုအပ်ပါသည်။
ဘ၀မှာ အခက်အခဲ ပြဿနာများနှင့် တွေ့ကြုံတိုင်း …အေးချမ်းသောစိတ် – မျှတသောစိတ် နှင့် တုံ့ပြန်သလား။ ပူလောင်သောစိတ်၊ ယောက်ယက်ခတ်သောစိတ်၊ သောကစိတ်၊ မကျေနပ်စိတ် တို့ဖြင့် တုံ့ပြန်သလား…….ဆိုတာ မိမိကိုယ်ကို အခုအချိန်မှာ ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့် မိမိရဲ့ လက်ရှိအသိ၊ အစွဲများ၊ သတ်မှတ်ချက်များ၊ အ၀တ်အစား၊ အဆောင် အယောင်များဟာ တကယ်တော့ ဘာမှမဟုတ်သေးဘူး၊ မပြည့်စုံသေးဘူးဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်လာပြီး – မိမိလက်ရှိဘ၀(စိတ်များ)ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း စတင် နားလည် သဘောပေါက် သိရှိလာပေမည်။
၆) အကြိမ်တစ်ထောင်မက ဆွေးနွေးငြင်းခုန်ခဲ့ကြသော်လည်း
ကျွန်ုပ်တို့ သေခြင်းတရား သို့ စိတ်ဆင်းရဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း၊ အကြိမ်ပေါင်း တစ်ထောင်မက ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ထို သေခြင်းတရား၊ စိတ်ဆင်းရဲမှု အပေါင်းမှ ကင်းလွတ်ရန် အကြိမ်ပေါင်း တစ်ထောင်မက ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်နေခဲ့ဖူးကြပါတယ်။ သို့သော် လက်တွေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနေသော ….. စွဲလန်းမှု၊ ဒေါသ၊ သောက ၊ ပူလောင်မှု၊ စိတ်ဆင်းရဲမှုတို့ စိတ်နှလုံး တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနေမှု ကို – အဟုတ်မထင်…အတည်မယူပဲ… စွန့်လွှတ်တတ်သည့်အလုပ် – ( မှန်မှန်ကန်ကန် နှလုံးသွင်းမှု – နှလုံးသွင်းမှန်မှု ) ကိုမူ အနည်းငယ်မျှပင် မကြိုးစားမိကြပေ။
စိတ်ဆင်းရဲမှုတို့ ပေါ်လာလျှင်လည်း မည်သို့ – စွန့်လွှတ်ရမည် – မည်သို့နှလုံးသွင်းရမည်-မည်သို့ လုပ်ဆောင် ဖြေရှင်းရမည်ကို သိနားလည်ခြင်းမရှိကြပေ။
၇) ကလျာဏမိတ္တ (သို့) ဆရာသမား
ဓမ္မ (သို့) သစ္စာလေးပါးတရားတို့ကို နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ စူးစမ်း လေ့လာခြင်းတို့ နှင့် မှန်ကန်စွာလမ်းညွှန်နိုင်သော ကလျာဏမိတ္တ (သို့) ဆရာသမားသည် ပထမအဆင့် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော…ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
ဓမ္မ (သို့) သစ္စာလေးပါးတရားတို့ဟာ အခါခပ်သိမ်း ရှင်းလင်းပြတ်သား နေသည်။ အရှုပ်အထွေးမရှိ။ ပဟေဠိမရှိ၊ လွန်လွန်ကဲကဲပြောခြင်းမရှိ၊ ပညာရှိ မှန်း သိအောင်ပြသော အပြမျိုးမရှိ။ အရှိကိုအရှိအတိုင်း သဘာဝကို သဘာဝ အတိုင်း ရှင်းပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းသည်။ ပြတ်သားသည်။
မရှင်းလင်းဘူး ဆိုလျှင် တော့ မိမိအစွဲ မိမိသတ်မှတ်ချက်အသိများက ကာဆီးထား၍ဖြစ်ပါသည်။
ဓမ္မ (သို့) သစ္စာတရား တို့မှာ ရှင်းသည်၊ ပြတ်သည်၊ အမှန်တရားသည် မှန်းဆခြင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိ။ နေရာ-ဒေသ-အချိန်ကာလ တို့ကို လွန်မြောက်ကာ………အမြဲမှန်ကန်နေလေသည်။
ဓမ္မ (သို့) သစ္စာတရား တို့သည် အစ၊ အလယ်၊ အဆုံး မည်သည့် အခြေ အနေ၌ မဆို ကောင်းကျိုးပြုသည့်အရာ ဖြစ်သည်။
အမှန်တရား သစ္စာတရား ကို မမေ့မှု ..သတိရမှု ..နှလုံးသွင်းမှန်မှုဖြင့်..ငြိတွယ်စွဲလန်းမှုမပါသော……
ဒါန ၊ သီလ၊ ဘာဝနာဟူသည်….
ဓမ္မအလုပ်များသည် လူသားအားလုံးပိုင် ဖြစ်ပါတယ်။
(ငါ့ဒါန၊ ငါ့သီလ၊ ငါ့ဘာဝနာ ဟူ၍ အဟုတ်ထင် …အတည်ယူမှု မပါပဲ ….လုပ်ရုံသက်သက် လုပ်တတ်ခြင်း သည် သာ…တရားအလုပ်အစစ်…..ဓမ္မအလုပ်အစစ်ဖြစ်လေသည်)
.တရားအလုပ်အစစ်…..ဓမ္မအလုပ်အစစ်သည် ……လူမျိုး တစ်မျိုးမျိုး၊ ဘာသာတစ်ခုခု၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့်သာ သက်ဆိုင် သည် မဟုတ်။ အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
၈) ဓမ္မအလုပ်အစစ်…..တရားအလုပ်အစစ် ဟူ သည်
မှန်ကန်သောနှလုံးသွင်းမှု….(သို့) မှန်ကန်သောနှလုံးသွင်းမှုကို လမ်းညွှန်ပြနိုင်သော ကလျာဏမိတ္တ (သို့) ဘုရား-တရား၊ သံဃာ တို့၏ အကူအညီမပါပဲ….မိမိ နှလုံးသားတွင်း မည်သို့မျှ သိရှိနားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်မှု၊ မှန်ကန်သော နှလုံးသွင်းမှုကို ကလျာဏမိတ္တ (သို့) ဘုရား-တရား၊ သံဃာ တို့၏ အကူအညီ…ဖြင့်…လက်တွေ့ လုပ်ဆောင် ကြည့်မှသာ မိမိ၏စိတ်နှလုံးတွင်း မိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့သော အစွဲများ၊ ချည်နှောင်မှု များ၊ အထုံးအဖွဲ့များမှ မည်သို့လွတ်ကင်းကာ မည်သို့ငြိမ်းအေးရသည်ကို နားလည် နိုင်ပါမည်။
၉) သစ္စာတရားကို မမေ့မှု၊ …သတိရမှု၊ သတိထားမှု
သစ္စာတရားကို မမေ့မှု၊ သတိရမှု၊ သတိထားမှု-နှလုံးသွင်းမှန်မှု ….ဟူသော…ဓမ္မအလုပ်အစစ်…..တရားအလုပ်အစစ်သည်
.နားလည်မှ လုပ်ဆောင်မည် မဟုတ်ပဲ…..လုပ်ဆောင်ကြည့်မှသာ မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်လာနိုင်မည့်အလုပ်ဖြစ်လေသည်။
သစ္စာတရားကို မမေ့မှု၊ …သတိရမှု ….နှလုံးသွင်းမှန်မှု….ဟူသော…ဓမ္မအလုပ်အစစ်(တရားအလုပ်အစစ်)သည် –
၁) မိမိ ပြုလုပ်သမျှ….အကြောင်းတရား (ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ) တို့ကို ငါ-ငါ့ဟာအဖြစ် အဟုတ်ထင်-ငြိတွယ်မှု မပါပဲ ….ပြုလုပ်ရုံသက်သက် ဖြစ် လာ စေ ပါ မည်….
၂) မိမိ တွေ့ကြုံရသမျှ…..အကျိုးတရား (ကောင်းကျိုး၊ မကောင်းကျိုး) တို့ကို လည်း ငါ ကောင်းတာ ဖြစ်တယ်…ငါ အဆိုးနဲ့ ကြုံရတယ် ဟူ သော ထင်မြင်မှု- အတည်ယူမှု မဖြစ်ပေါ်ပဲ…..တွေ့ကြုံရုံသက်သက် ဖြစ် လာ စေ ပါ သည်….
ထိုကဲ့သို့ သော အသိဥာဏ် ကို ….နှလုံးသွင်းမှန်မှု (သို့) မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်မှု…(သို့) ၀ိပဿနာဥာဏ် (သို့) ပဋိပဒါဥာဏဒဿန၀ိသုဒ္ဓိ စသည် ဖြင့် မိမိနှစ်သက်ရာ….အမည်ပေးနိုင်ပါသော်လည်း တကယ့် နှလုံးသွင်းမှန်မှု အစစ် (မှန်ကန်သောနားလည်မှုအစစ်) သည် တစ်ခုခုဖြစ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်၊ ဘာဖြစ်၊ ညာဖြစ်၊ ဘာမှမဖြစ် ဟူသော အခြေအနေတိုင်းအပေါ် …တဖြည်းဖြည်း နှင့် အတည်ယူမှု …အဟုတ်ထင်မှု….ငြိတွယ်မှု ကင်းကင်းလာပေသည်။
နှလုံးသွင်းမှန်မှု (သို့) မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်မှု…ဟူသည့် တရားအလုပ်အစစ်….မပါဝင်ဘဲ –
တစ်ခုခု၊ တစ်ယောက်ယောက် ကို
အဟုတ်ထင် အတည်ယူမှု (ပုဂ္ဂိုလ်၊ သတ္တ၀ါ ဟူသော အယူကို) မစွန့်လွှတ်နိုင်သေးဘဲ…..
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ မိမိကိုယ်ကို စိတ်ထား ကောင်းသူ၊ တရားသိသောသူ၊ ငြိမ်းအေးသောသူ ဖြစ်ချင်နေခြင်းသည် မိမိကိုယ်ကို လှည့်စားခြင်းသာဖြစ်ပါသည် –
ကိလေသာတို့၏ ကောက်ကျစ်မှုကို ခံရခြင်း သာဖြစ်ပါသည်။
မိမိ နှင့် သူတပါးအကျိုးရရှိရန် ဓမ္မစစ်၊ ဓမ္မမှန် အလုပ်များကို လက်တွေ့ ကျင့်သုံးကာ သိနားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ အစစ်အမှန်၊ အနှစ်သာရ ကို တန်ဖိုးထား တတ်အောင် သေချာစွာ ခွဲခြားနားလည်နိုင်ရပေမည်။
၁၀) တရားဓမ္မအလုပ်အစစ်ကို နားလည်မှု နှင့် နားမလည်မှု
နှလုံးသွင်းမှန်မှု (သို့) မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်နေမှု…ဟူသည့် တရားအလုပ်အစစ်….ကို မှန်ကန်စွာ-မသိရှိသေးပါက ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဒေါသဖြစ်မှု၊ ရန်ငြိုးထားမှု၊ စိတ်နှလုံးမသာယာမှု၊ ခေါင်းမာမှု၊ ဘက်လိုက်မှု၊ ကျဉ်းမြောင်းမှု၊ အယူသီးမှု၊ ထိတ်လန့်မှု တို့နှင့် သာ အပြည့်ရှိနေပြီး ဘ၀ဟာ အဓိပ္ပါယ် မရှိ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ ပူလောင်စရာ၊ စိတ်ရှုပ်စရာများနှင့်သာ ဖုံးလွှမ်းနေပါလိမ့်မယ်။
နှလုံးသွင်းမှန်မှု (သို့) မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်မှု…ဟူသည့် တရားအလုပ်အစစ်…ကို နားလည်သဘောပေါက်သွားပါက…ပွါးများကျင့်သုံးတတ်သွားပါက…ကျွန်ုပ်တို့ဟာ မေတ္တာထားမှု၊ ကြင်နာသနားမှု၊ ဓမ္မစစ် အပေါ်ယုံကြည်မှုများ တိုးပွားလာပြီး ဘ၀ သည် အရှိန်အ၀ါကြီးမားကာ၊ ထိန်လန့် စိုးရိမ်မှုတို့ကင်းရှင်းကာ ရိုးသားမှု၊ ပြတ်သားမှု၊ စင်ကြယ်သန့်ရှင်းမှုများ နှင့် ပြည့်စုံလာပေလိမ့်မည်။ ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းမှုတို့ တောင့်တစရာမလိုဘဲ အလိုလို ရရှိလာပေလိမ့်မည်။
တရားဓမ္မအစစ်သည် လက်ငင်းပင် အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်စေပါသည်။ လက်ငင်း ဖြစ်လာသော အကျိုးကျေးဇူးသာလျှင် ဓမ္မစစ်၊ ဓမ္မမှန် ဟုတ်မဟုတ် အတွက် မိမိကိုယ်တိုင် သိရှိနိုင်သော သူတပါးကိုမေးစရာမလိုသော မှတ်ကျောက် အစစ် ဖြစ်လေသည်။
Thanks for sharing this article.I agree with the yr. idea of no(3) and no.(10) .
We should take meditation with right understanding.This is the right and middle way to walk Dhamma path.Thanks for sharing audio files.Please share yr first Dhamma book online.
မှန်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မငြိမ်မသက်စိတ်နဲ့ပဲ ပြန်လည် တုံ့ပြန်တာများပါတယ်။ တစ်ခါတလေလည်း ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ စဉ်းစားရင် ဒီလို ဒေါသကို ပယ်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကိုပေါ့။
အမှန်တကယ် နားလည်မယ်.. ပြီးတော့ အမှန်တကယ်လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်…
လောက အလှဆင်ရင်း.. အနှစ်သာရတို့ကို ကိုယ်တွေ့ရှာဖွေတွေထိခံစားနိုင်ပါတယ်..
နံပတ်(၅)-ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ ဆိုတဲ့အချက်လေးကို ဖြည့်စွက်ပြီး အကြံလေးပေးပါရစေ။ လူတွေဟာတနေ့တာလုံး အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ လှုပ်ရှားနေကြရတာပါ။ ညအိပ်ချိန်တော့ လူတိုင်းမှာရှိကြပါတယ်။ ညအိပ်ဖို့ အိပ်ရာထဲဝင်ပြီး လဲလျောင်းပြီးတာနဲ့ “ ဒီနေ့ငါဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ၊”ဆိုတာလေးကို ပြန်တွေးကြည့်လိုက်ပါ။အေးချမ်းစွာနဲ့တွေးပါ။မိမိရဲ့စိတ်ကို မညာဘဲနဲ့ ကိုယ်ကိုကိုယ်ဝေဖန်ကြည့်ပါ။ ငါတော့ ဒီနေ့ဘယ်သူနဲ့ ပြသနာတက်တယ်။ငါပြောတာတွေထဲမှာ ဘာတွေအမှားပါသွားတယ်။ဘယ်သူ့ကိုတော့ ငါကူညီလိုက်တယ်။ဘယ်သူ့ကိုတော့ ငါရန်တွေ့လိုက်တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကိုတော့ လုံးဝမညာပါနဲ့။(လူဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ညာတတ်ကြတယ်လေ)။အေးအေးဆေးဆေး တွေးကြည့်။ကိုယ်မှားရင်လည်း မှားတဲ့အဖြေထွက်လာလိမ့်မယ်။မှန်ရင်လည်း မှန်တဲအဖြေ ထွက်လာလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ဘက်မှန်နေပြီး ပြသနာဖြစ်နေရင်လည်း နားလည်အောင်တော့အေးအေးဆေးဆေးရှင်းပြရမှာပဲ ဆိုတဲ့အတွေးမျိုး၊ ကိုယ်ကမှားသွားရင်လည်း ငါမှားသွားပြီ ဒီလိုမပြောသင့်ဘူး ငါမနက်ဖြန်တောင်းပန်လိုက်ပါမယ်လေ ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေ“တွေးပေးပါ။ တကယ်ကို ငြိမ်းချမ်းသွားပါတယ်။စိတ်လည်းအေးသွားပါတယ်။ ဒီလို နေ့တိုင်းမိမိကိုယ်ကို ဝေဖန်နိုင်လေ ပိုပြီးအေးချမ်းမှုရလေပါပဲ။နောက်ဆို စိတ်တွေက သူ့အလိုလို အေးချမ်းပျော့ပြောင်းလာပါတယ်။နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါ နားလည်မှု ခွင့်လွှတ်နိုင်မှု၊သည်းခံနိုင်မှု ဆိုတာထက် အေးချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးကို ပိုင်ဆိုင်လာပါလိမ်မယ်။ဒါဟာ ဘုရားတရားလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ပုံမှန်မလျောက်နိုင်သေးသော သာမာန်လူတို့ အတွက် အပန်းမကြီးတဲ့ မိမိစိတ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလေးကို မျှဝေဆွေးနွေးတာပါ။အားလုံးပဲ အမှားများပါခဲ့ရင် နားလည်ပေးနိုင်ကြပါစေ။
ဓမ္မ (သို့) ဘ၀တစ်လျှောက်နေသွားနည်း စာအုပ်ကို ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ ညဏ်မမှီလို့ လက်လျှော့ခဲ့ရတယ်။ နံပတ် ၄)အချက်ဖြစ်တဲ့ တွေ့ကြုံလာသမျှ အကောင်းအဆိုး တို့အပေါ်…….တွေ့ကြုံရုံသက်သက်ဖြစ်စေဖို့ ဆိုတာ ဆူနာမီဆရာတော်တရားတွေမှာ ခဏခဏထည့်ပြောတာ တွေ့ရပါတယ်။ အလွန်အဆင့်မြင့်တဲ့ အသိမိုလို့ လိုက်နာကျင့်ကြံဖို့ လွန်စွာခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ကြားကြားကမတ်တပ် မြင်မြင်ကာမတ်တပ်ဆိုတာ အထက်အရိယာကြီးများသာ လုပ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆတာမိုလို့ ကျနော်ကတော့ ကိုယ်သွားရမဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ဦးတည်ထားပါတယ်….
>>Sister mandalarthu , I will share my first dhamma ebook distributed online to you via asapost.
ကို bigcat ရေ…
ကျွန်တော့်အမြင်….တွေ့ကြုံရုံသက်သက်ဖြစ်စေဖို့ ၊ မြင်ကာမတ္တ၊ ကြားကာမတ္တ ဟာ ၀ိပဿနာဥာဏ်ဖြစ်ချိန်၊ သို့မဟုတ် နှလုံးသွင်း မှန်မှုအချိန်မှာ ဖြစ်နေတယ် လို့ နားလည်ပါတယ်။ ကြား…ကြားကမတ္တ မြင်..မြင်ကာမတ်တ္တဆိုတာ မဂ်ဥာဏ်ဖိုလ်ပေါက် အထက်အရိယာကြီးများက လုပ်စရာမလိုပဲ တချိန်လုံး ဖြစ်နေပြီး၊ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒီဘ၀မှာတင် မဂ်ဥာဏ် ဖိုလ်ဥာဏ်ရောက်အောင်ထိ ရည်မှန်းချက်ထားပါက…မဂ်ဥာဏ် ဖိုလ်ဥာဏ်မဖြစ်ခင် ဖြစ်ပေါ်ရမယ့် ၀ိပဿနာဥာဏ် ဖြစ်ပေါ်မှု (တွေ့ကြုံရုံသက်သက်ဖြစ်စေဖို့ ၊ မြင်ရုံ…ကြားရုံသက်သက်) ဆိုတာ…အဓိက အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် ။အရိယာဖြစ်ပြီးမှ လုပ်ယူရမှာ မဟုတ်လို့ နားလည်မိပါတယ်။